15 | Mar | 2021 | SAVE OUR COUNTRY | SAVE MYANMAR | RESPECT OUR VOTES | HONOR ELECTION RESULTS
တာမွေတွင်ကျဆုံးသွားသော ဆေးကျောင်းသား လေးရဲ့ မိခင် ရင်ဖွင့်သံ
Posted on Mar 15, 2021 by ချစ်သဲညှာ	Leaveacomment
အသုံးချတတ်ရင် အရာအားလုံးဟာ လက်နက်ချည့်ပဲ
“ပိုကောင်းတဲ့ အသစ် လိုချင်ရင်အဟောင်းကို ဖျက်ရမယ်” မင်းကိုနိုင် ၁၅.၃.၂၀၂၁
မြစ်ကြီးနားမြို့ ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်က လူမဲ့သပိတ်
Posted on Mar 15, 2021 by Nandar Aye	Leaveacomment
■ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ လမ်းမကြီးပေါ်က ပလက်ဖောင်းပေါ်တွေမှာ စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေးအတွက် မတ် ၁၅ ရက် ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာ လူမဲ့သပိတ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီမနက်ပိုင်းမှာလည်း မြစ်ကြီးနား၊ နမ္မတီး၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးရေးအတွက် ပြောက်ကျား ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားတဲ့ လှိုင်သာယာမှာ ဆန္ဒဆက်ပြ
မွန်ပြည်နယ် ၊ ဘီလူးကျွန်းချောင်းဆုံမြို့နယ်မှ ရဲတပ်သားတစ်ဦး CDM တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်
ထို့အပြင် စစ်ကောင်စီမှ ဦးစီးလုပ်ဆောင်သော မည်သည့် ပညာရေးသင်တန်းကိုမဆို တက်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ CRPH ကို ကြိုဆို လက်ခံကြောင်းနှင့် စစ်မှန်သော တရားမျှတမှု ရရှိမှသာလျှင် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတာဝန်များကို ဆက်လက် ထမ်းဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပါဝင်သည်။
နဂါးကြီးရဲ့ နှာနုဖြတ်ရိုက်လိုက်တဲ့ KIA နဲ့ အာဏာရှင် ကျဆုံးရေး ​လေ့လာမှု
ပြည်မနဲ့ နိုင်ငံအဝန်း အာဏာရှင်စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အချိန်အခါ၊ မြောက်ပိုင်းဒေသဖက်မှာ ဒီအတောအတွင်း အဖြစ်အပျက် ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်သွားတာတွေရှိပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြလိုပါတယ်…
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ ( ၄) ဖွဲ့ တွေနဲ့ ဒီလ ၁၃ – ၁၄ ရက်မှာ တရုတ်အစို့းရ ကိုယ်စားလှယ်တို့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ပြည်တွင်း၊ ပြည်မမှာ ဆန္ဒပြနေတာက ပြည်တွင်းရေးဘဲဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင်တွေက သွားမပတ်သက်ဖို့ရယ်၊ အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ရမှာက အမေရိကန်ဝင်လာရင် စစ်ဖြစ်ပြီး ပိုဆိုးသွားနိုင်ကြောင်း တရုတ်ကြီးက မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကို ဆန္ဒပြပြည်သူနဲ့ မပတ်သက်ဖို့ ထပ်မံ သတိပေးလာပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ခေါက်က အာဏာသိမ်းသိမ်းခြင်းမှာ သတိပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
UWSA ” ဝ ” အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ KIO ငှာနချူပ်ခေါင်းဆောင် အချို့တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ နောက်ပိုင်း ယနေ့အချိန်အထိ ယူနန်ပြည်နယ် ခွေးမြင့်မြို့မှာ အကျယ်ချူပ်သဘော ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ.. ပြည်မအရေး၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကို မသိမသာကြည့်နေ၊ သွားရှုတ်စရာမလိုဘူး,, အချိန်တန်ရင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ထိန်းချူပ်သွားနိုင်မယ်ပေါ့၊ တနည်းပြောရရင် တရုတ်က အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ဘက် အပြည့်အဝ ရပ်တည်ပေးလိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ FPNCC ရဲ့ ထိပ်သီး ” ဝ ” ခေါင်းဆောင်နဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့တို့ဟာ အကျယ်ချူပ် အထိန်းအသိမ်းမခံရရင် FPNCC က အရှိန်အဟုန်နဲ့ မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်ကို သိမ်းသွားနိုင်တယ်။ စစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါ တရုတ်ရဲ့ အဓိက အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းကို ထိခိုက်မိမှာ စိုးရိမ်တော့၊ အဲဒါကို တစ်ရုတ်နဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ကြိုသိနေတယ် အဲ့ဒီအဆင့် ရောက်မသွားအောင် ထိန်းတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တာက တရုတ်ကြီးနဲ့ မအလ အပေးအယူပေါ့၊ တရုတ်က အမြတ် အဆ ၁၀၀ မထွက်ရင် သူ့အိတ်ထဲက ဘာမှ မစိုက်ထုတ်ပါဘူး… မအလက စစ်တပ်ကို ပြည်သူတွေ ဆန့်ကျင်တဲ့ အခါမှာ မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေ မပါဝင်ဘို့ တရုတ်ကို အကူအညီတောင်းတာတော့ သေခြာသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အပေးအယူလည်း ကြီးနိုင်ပါတယ် ( ဉပမာ – မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ပြန်လုပ်နိုင်ခွင့်၊ မြေရှားတို့နဲ့ အခြားတွေပေါ့)
ဒါဆိုရင် ဘာလို့ KIA က ယခုရက်တွေအတွင်း ဖားကန့်၊ ကားမိုင်း နဲ့ ဒီမနက် တနိုင်းမြို့နယ် ရှဒူးဇွပ် ၃ နေရာကို တိုက်ပွဲ ဖော်ဆောင်ရတာလည်း ? စဉ်းစားမိတာက..
စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နောက်ပိုင်းကနေ,,, ရှမ်းမြောက် ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) ဘက်မှာ မြန်မာစစ်တပ် ၉၉ က စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ ဆင်လာတာကို တရုပ်က မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကို မပြောဘူး၊ မတားဘူး။ ဒါကြောင့် ကေအိုင်အေက နဲနဲတော့ စိတ်ပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်.. ကေအိုင်အေက.. အာဏာသိမ်း စစ်တပ်ကို ပြည်သူလူထုအပေါ် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကိုင်တွယ်မှု မလုပ်ဘို့ PCG ကနေ ကြိုတင် သတိပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်က မလိုက်နာဘူး.. ပိုဆိုးလာတယ်..ပြည်သူကို ရန်သူလို သဘောထားပြီး စနိုက်ပါနဲ့ ပစ်သတ်၊ ဖမ်းဆီးတာတွေ ဆက်တိုက်ပိုလုပ်ဆောင်လာတယ်။ KIA ရဲ့စကားကို ဂရုမစိုက်တာပေါ့။
ထူးထူးခြားခြား တရုတ်မနောခွေ့မဲ့ စာတစ်​​စောင်တောင်ထုတ်ပါတယ်၊ စာထုတ်တဲ့ အခါမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပိုက်လိုင်းတွေ မထိခိုက်ဖို့ အောက်ခြေ တပ်သားတွေ အတိအကျ လိုက်နာဖို့ကို ပြောထားပါတယ်၊ ဆိုလိုချင်တာက KIA ထိန်းချူပ်နေရာက ပိုက်လိုင်းတွေ ပေါက်ကွဲ သွားရင်တောင် KIA ကြောင့် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကြိုတင် ပြောဆိုထားပြီးသား သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။ နောက်တနည်းတွက်ရရင် KIA က တရုတ်ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲသွားနိုင်တယ် ဆိုတာကို တွက်ပြီးသား ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါ​ကြောင့် လိုအပ်ရင် ​ကေအိုင်​တော့ မဖျက်ဘူး ပြည်သူက ဖျက်​ပေါ့..​ကေအိုင်​အေနဲ့ ကချင်ပြည်သူက အတူတူဘဲ​လေ ရှင်း​နေတာဘဲ။ …. ပျောက်ကျားနည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်တဲ့ အခါ ရန်သူလာမဲ့လမ်း၊ တံတား၊ ကား၊ တာဝါတိုင်၊ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးတာက၊ အသုံးပြုရမဲ့ နည်းဗျူဟာတွေပါ။
KIA က Geo Politics အရ တရုတ်နဲ့ မတတ်သာလို့သာ ဆက်ဆံရပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကို အနောက်နိုင်ငံနဲ့ ကူးလူး ဆက်ဆံတဲ့ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒ၊ အမြင်နဲ့ စေတနာရှိတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ( မြန်မာက နောက်ပိုင်းမှာ တရုတ်နဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဗီယက်နမ်လို အနောက်နဲ့ပေါင်းပြီး တရုတ်ကို အမှီခိုနည်းတဲ့ ပုံစံလို ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် )
ဒါကြောင့် တိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လာရင် KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက တိုက်ပွဲတွေဟာ ဗဟိုညွန်ကြားချက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အောက်ခြေတပ်မှူးတွေက တိုက်ပွဲ ဖော်ဆောင်တာလို့ဘဲ ဖြေပါတယ်။ အင်မတန်ပါးနပ်တဲ့ အဖြေရယ် ခဲတလုံးနဲ့ ငှက် ( ၄ ) ကောင်လောက်ထိအောင် ပစ်လိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ ထိတယ်လိုလဲ မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေက KIA ရဲ့ လှည့်ထွက်ကွက် ဖြစ်ပါတယ်။
အချူပ်ပြောရရင် တရုတ်က သူ့စီးပွားထိရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်ဘူးဆိုတာ မနေ့က လှိုင်သာယာအဖြစ်အပျက်မှာ တွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြလို့ လူတွေ စတင်ထိခိုက်သေဆုံးတာကို အနောက်နိုင်ငံက အတိအလင်းကန့်ကွက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း အာဆီယံနိုင်ငံတွေတောင် ပါလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်က ပြည်တွင်းရေးဖြစ်တယ်လို့ ီတသွင်သွင်ပြောပြီး အာဏာရှင်ကိုဘဲ ကာကွယ်ပေးနေတာပါ။
ဒါပေမဲ့ သူနိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့ စက်ရုံတွေ မီးလောင်လာတဲ့ အခါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောဆိုလာပါတယ်၊ မအလဘက်ကို သေခြာ လုံခြုံရေးပေးဖို့ရယ်၊ ပြည်သူတွေကိုကြတော့ အကြပ်အတည်းကို တရားနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဘို့ ပြောပြီး ဖျက်ဆီးတဲ့သူကို အရေးယူဘို့ ပြောလာပါတယ်။
တကယ်တမ်းသာ တရုတ်တွေရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို တနည်းမဟုတ် တနည်း ပြည်သူတွေအားလုံး နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးကြည့်ပါ၊ မလအနဲ့ အဖွဲ့သေခြာပေါက်ပြာသွားပါမယ်၊ သူတို့တွေ အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူး၊ တကယ်တမ်းလုပ်ကြည့်ပါ စက်ရုံတွေကို ကာကွယ်လိုက်၊ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို နိမ်နင်းလိုက်၊ CDM လုပ်တဲ့သူတွေ ကိုပြသာနာရှာလိုက်နဲ့၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို တိုက်လိုက်နဲ့ဆို ရေရှည်မှာ မအလတို့ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုပြည်သူက အဲ့ဒါဘက်ကို မစဉ်းစားသေးလို့ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် မအလတို့ အဖွဲ့ ဒုက္ခရောက်ဖို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ..
တရုတ် စီးပွားရေးအားလုံးကို နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ထိခိုက်အောင်လုပ်ပါ
တိုင်းရင်းသားတွေ တိုက်ပွဲ ပါးပါးလေး၊ ပုတ်ပါ လိုအပ်ရင် ထူပါ
ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားတွေ CDM လုပ်တဲ့သူနဲ့ ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေကို ဗျူဟာ တစ်ရပ်လို သဘေားထားပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ရေတို၊ ထောက်ပံမှုကို တာဝန်ယူပါ
CRPH နဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ ပူးပေါင်းလို့ရတဲ့ ပါတီအဖွဲ့တွေနဲ့ Political Road Map နိုင်ငံရေးလမ်းညွန် ( လက်ရှိတပ်မတော် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အရေးယူဒဏ်ခတ်ဖို့ ပါရပါမယ်) တစ်ခုချမှတ်၊ ပြီးတော့ ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကို စတင်ရေးဆွဲ၊ အသစ်သော နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကိုသွားဖို့ တာစူရပါတော့မယ်။
CRPH က နိုင်ငံတကာ မှာ ဆက်လက်ပြီး လက်ရှိတာဝန်ပေးထားတဲ့ ဒေါက်တာ ဆာဆာတို့ အုပ်စုကို ထိထိရောက်ရောက် ဆက်လက်လုပ်ခိုင်းနိုင်ရင်တော့…အာဏာသိမ်း မအလ အုပ်စုကို တွန်းလှန်တဲ့တော်လှန်ရေးဟာ အောင်မြင်ပြီး တရုတ်ရဲ့ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်သွားနိုင်မဲ့ အပြင်၊ တိုးတက်သာယာဝပြောတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဖိုက်တင်း Gen XYZ !!!!! ဘကြီးဇက် ၁၅/၃/၂၀၂၁
1001008 comments52 shares